I-Chacma Baboons (i-Papio Ursunis) ayisoloko ephethe ukulahlekelwa kwemfuyo, kodwa amabutho angabangela umonakalo omkhulu ezivini, izimila nezithelo zezithelo. Zenzeka ezindaweni ezihlukahlukene eNingizimu Afrika, ngaphandle kweNamaqualand Sandveld lapho kunendawo encane ukuba bafihle khona ebusuku.
Baye bavumelana kahle nezimo eziguquliwe ngabantu, abantu bezondla izinkumbi beqinisa ukubambisana kwabantu ngokudla futhi baxoxisane nomqondo wokuthi izinkumbi ziphakeme kakhulu kunabantu, ngoba izimfene ezivame ukudla zivame ukudla okuncane kakhulu. Amabhabhu ane-snout enjengezinja futhi afana nemfucumfucu ngokumnyama embala noma enombala obomvu, enezintambo ezimnyama nape noboya abamnyama ezandleni nasezinyaweni.
Ziyizimbuzi ezinkulu. Ngokomqulu we-Predation Management, abesilisa balinganisa ubude obuyi-120 cm kuya ku-160 cm, balinganisa u-25 kg kuya ku-45 kg futhi banamazinyo abukhali obuchopho, benomso entanyeni namahlombe. Imisila yawo ingaba ngu-86 cm ubude. Amantombazane angama-100 cm kuya ku-120 cm ubude futhi anesisindo esingu-12 kg kuya ku-20 kg. Umsila wabo ulinganisa phakathi kuka-50 cm kuya ku-60 cm.
Amabhoons avuthiwe ngokocansi uma eneminyaka engamahlanu ubudala futhi engumlingani unyaka wonke. Isikhathi sokubeletha sinezinyanga eziyisithupha ubude kanti izinsana ziyanconywa emva kwezinyanga eziyisithupha kodwa zizohlala zixhomeke kunina kumvikelo kuze kube yilapho ineminyaka emibili ubudala.
Obaba bavikela kakhulu inzalo yabo futhi ngezinye izikhathi bayabasiza abasha, kuyilapho umanyolo womama. Abesilisa abavuthiwe bavame ukushiya inqwaba yabo bese bezama ukujoyina elinye iqembu lapho beneminyaka engaba yisikhombisa ubudala, okusiza ukugcina inbreeding low. Abesilisa basengozini kakhulu futhi ngokuvamile babonakala njengabaqashi ngesikhathi besifuna iqembu elisha.
Uma umholi - obizwa ngokuthi i-alfabini - echithwa, umholi omusha angabulala yonke inzalo yomholi wangaphambili. Ngaphandle kwezinsana zokuncelisa, abesifazane basheshe bahlale bekulungele ukukhiqiza futhi. Amabhabhu angakhula afike eminyakeni engama-40 ubudala.
Ukubulala Nendlela Yokudla
Isibonelo Amaposti angabalwa njengambalwa kunamaphini ayikhulu namakhulu, nezindawo zasemakhaya zihluka phakathi kuka-1,5 km² kuya ku-40 km², ngokusho kwe-Endangered Wildlife Trust. Amasosha amakhulu ayenamabhande amakhulu asekhaya futhi ahlasele ngokweqile, kuyilapho amabutho anesidingo sokudla okuphezulu kanye nezinsiza zivame ukuba nezindawo ezincane zezindlu kanye nobubanzi ezingeni eliphezulu. Amabhabhane ngokuyinhloko asebenza emini futhi abuyele emithini noma emanzini ngaphambi kokushona kwelanga.
Ngenkathi amabhantshi e-omnivores, ukudla kwabo ngokuyinhloko kuhlwanyela. Ukuzingela kungumsebenzi wesilisa kuphela, ngokusho kweNcwadi yokuPhathwa kwePredation. Ayikho iphethini lokubulala, kodwa inyamazane ibulawa ngamanxeba amaningi. Izimvu ezinkulu zivame ukuphonswa bese zilunywa esifubeni, kuyilapho amawundlu angase avulwe. Ukuziphatha kwabo kokudla kuyinto engcolile, nezilwane ezidlayo zikhunjulwa entanyeni nasekhanda. Ngokuvamile baqala ukudla esiswini sobisi, amathumbu asusiwe futhi isikhumba sidabukile ukuze sinikeze ukufinyelela ku-rump. Ama-Ribs, izinso, isibindi, amaphaphu nenhliziyo nazo zidliwa.
Imfene izilwane ezihlakaniphile, ngakho-ke bafunda ngokushesha ukunqoba nokuvimbela izivimbelo. Ukufakwa kwesithango kagesi, umsindo, uklashwa kwezilwane, ukusetshenziswa kwebelusi kanye nezilwane eziqapha kungasiza ekuvimbeleni ukulahlekelwa, kodwa ucwaningo olusha luye lwathola ama-prisms angabonakali ukuba angabi nethonya kumafuba, ikakhulu lapho asetshenziswa ezindaweni zasemadolobheni lapho izinkumbi sezijwayele ukukhanya khona kuboniswa kusuka kumafasitela. Iziphathimandla ezifanele kufanele zithintane nezimvume zokubopha noma ukudubula izinyane.
Ziyizilwane ezivikelwe eNtshonalanga Kapa, ​​ngakho abalimi kulesi sifundazwe bangadubulela amabhantshi amabili ngosuku ezweni labo ngaphandle kokuba banemvume yokudubula ngaphezulu. Ukudubula kwamabhantshi kungase kube "ukubuyela emuva", ngokubangela ukuba "abahlukumezayo" abancane babambe. Ngokusho kweBaboon Matters, ukubulawa kwe-alfabhethi kubangela ukuxoshwa ngaphakathi kweqembu futhi kungabangela amabutho amancane alawulwayo angaphatheki amaqembu ahlukumezayo.